आजको तस्वीर : यसरी बडीगाड खोलामा चोबलेर धर्म परिवर्तन ! – ebaglung.com
२०७५ मंसिर ८, शनिबार १३:४७	Top News, अन्य समाचार, विविध
बुर्तिवाङ २०७५ मंसिर ८ । मुलकमा ईशाई धर्म परिबर्तन गराउर्ने अभियानलाई यस्का अनुयायीहरुले तीब्रता दिएका छन् । देशका विभिन्न जिल्लाहरुमा विभिन्न नाममा क्रिश्चयन सस्था तथा चर्च सन्चालन गरी हिन्दु लगायत अन्य धर्माबलम्बीहरुलाई आर्थिक प्रलोभन र असाध्य (निको नहुने) क्यान्सर जस्ता रोग निदानको लागी प्रभु ईशुको शरणमा गए निको हुने भ्रमजालमा पारेर धर्म परिवर्तन गराउने काम भैरहेको छ ।
गल्कोटको हटियामा गत २०७३ सालदेखि सन्चालित सच्चाईको सत्संग नामक क्रिश्चियन धर्म प्रचारक संस्थाले पुरुष एवं महिलाहरुलाई भेला गराएर यशु, पिता, परमेश्वरको नामको भजन कृतन गयो भने छारे, बाथ, मुटु, घाँटीको टन्सिल, हाडजोर्नी देखि क्यान्सर सम्मका असाध्य रोगहरु निको हुन्छ भन्ने भ्रममा पारेर धर्मपरिवर्तन गराउने कार्य भैरहेको छ । डाक्टरहरुले समेत उपचार गर्न नसकेका रोग समेत यशु प्रति पबित्र बिश्वासका साथ सत्सँगमा सहभागी भए निको हुने झुट्टा प्रचार गरी धर्म परिवर्तन गर्ने गलत काम भैरहेको छ । असाध्य रोगहरु यशुको भजन कीर्तन र सत्संग गरे निको हुन्छ भन्ने जस्तो झुटको खेती गरेर लाटा सिधा महिला पुरुषहरुलाई धर्म परिवर्तन गराउने खेती बागलुङ जिल्लामा फस्टाई रहेको छ ।
जिल्लाको पश्चिम केन्द्र बुर्तिवाङ बजारमा त क्रिश्चियन धर्म परिवर्तन गराउने काम खुलेआम भैरहेको छ । ईलाका प्रशासन कार्यालय र ईलाका प्रहरी कार्यालयको निकटमा रहेको चर्चबाट खुलेआम धर्मपरिवर्तन गराउने काम भएको स्थानीयको आरोप छ ।
बुर्तिबाङमा धर्म परिवर्तन गराउने नाममा मानिसलाई खोलामा डुबाएर सपथ खुवाउने गरिन्छ । अन्य जुन कुनै धर्मबाट इशाई धर्ममा प्रवेश गराए पछी नवप्रवेशीलाई बडीगाड खोलामा डुवाएर (चोबलेर) धर्मपरिवर्तन गर्ने गरेको पाइएको छ ।
गत आइतबार दिउँसो बडीगाड खोलामा एक महिलालाई डुबाएर धर्म परिवर्तन गरिएको घटनाले तत्क्षत्रमा सनसनी फैलिएको छ । इशाइ धर्ममा प्रवेश गराएपछी ‘इशुको विश्वास गर्छु र जीवन मरण सम्म उहाँकै आज्ञापालना गर्छु…’ भन्दै किरिया खुवाउनका लागि यस्तो गरिएको चर्चका प्रमुख विमल पाण्डेले बताए ।
यसरी दुई/तीन जनाले समातेर तीन/चार पटक मानिसलाई खोलामा चोबलेर धर्म परिवर्तन गराएकोमा स्थानीयहरुले मानवियताको पराकाष्टाको संज्ञा दिएका छन् । केही स्थानीयले सामाजिक संजालमार्फत त्यस्तो कार्य गरेको विरोध समेत जनाएका छन् ।
गत आईतबार दिउसो धर्मपरिवर्तनको यो अमानवीय कुकृत्य स्थानीय जो जस्ले प्रत्यक्ष देखे उनिहरुले जीब्रो काढे । चर्च नजिकै रहेका इलाका प्रशासन र ईलाका प्रहरीले देखे देखेनन् त्यो थाहा पाउन सकिएको छैन । तर बलात् धर्म परिवर्तनको यो कुकृत्य अमानवीय त छँदैछ,, दण्डनीय पनि छ ।
धर्म प्रचारको नयाँ शैली : सत्संग, भजन कीर्तन गरेर असाध्य रोगहरु निको होला ?
मालिका देवीको दर्शनार्थ आउने श्रद्धालुहरुलाई समाजसेवी थापाले खुवाए नि:शुल्क चिया-पुरी !